Nwa ọnwa asatọ anwụọla ka Pastọ na-eti nwunye ya ihe – National Light
NDỊ uweojii kọmandị steeti Ogun, anwụchikọọla otu Pastọ gbara afọ iri ise aha ya bụ Isaac Akinbola, maka ịgbaziri ụmụnwaanyị abụọ e chere na ha bụ ndị o debere n’iro (cocubines) ka ha tie nwunye ya ihe. Ka ụmụnwaanyị ndị ahụ na-eti nwunye Pastọ ahụ aha ya bụ Dasola Akinbola ihe ka e kwuru na nwa o ku n’aka dị ọnwa asatọ si n’aka ya daa n’ala, nwụọ.
Onyeuweojii na-ahụ maka ọdị mma ha na ndị mmadụ na steeti Ogun, DSP Abimbola Oyeyemi n’ozi o ziri ndị ntaakụkọ n’Abeokuta, kwuru na ya bụ ihe mere n’Awa Ijebu dị n’okpuru ọchịchị Ijebu North na steeti ahụ.
Oyeyemi kwuru sị na a nwụchikọọla pastọ ahụ na ụmụnwaanyị abụọ ahụ bụ Esther Olowolayemo na Oluwakemi Oshinbajo maka iti nwunye pastọ ahụ ihe, tinyere igbu Obadiah Akinbola.
Ọ kọwara na a nwụchikọrọ ndị ahụ site na mkpesa nke nwunye pastọ ahụ wetara n’ogige ndị uweojii ‘divisional headquaters’, Awa Ijebu.
Okwuputa okwu ndị uweojii ahụ kwuru na Dasola na mkpesa ya kọwara na ya na pastọ dị ya na-enwebu nghotahie n’ihi mmekọ akwamiko ya na ụfọdụ ụmụnwaanyị ndị ụka ya na-enwe. Dịka ozi ahụ si kwu, nwunye pastọ ahụ kwuru na di ya na ụmụnwaanyị abụọ ọ dị mbụ enyo enyo na ha na di ya na-apịtọ, bịara n’ụlọ ya di na Ipinle, Mamu Ijebu, maka iti ya ihe.
Onyeuwojii ahụ kwuru sị: “Ka ha na-eti ya ihe, nwa ya dị ọnwa asatọ, Obadiah Akinbola dara, oge di ya na-ajali ụmụnwaanyị abụọ ahụ ka ha tie ya ihe. Site na mkpesa ahụ, DPO division Awa Ijebu, CSP Adewalehinmi Joshua nyere iwu maka ịnwụchikọ mmadụ atọ ahụ, ebe a kpọgara nwaanyị ahụ na nwa ya ụlọahụike Manu Ijebu Health Centre maka nleta. E mechara ziga nwaanyị ahụ na nwa ya Blessed Hospital Oru Ijebu ebe a nọrọ chọpụta na nwata ahụ nwere mmerụ ahụ n’ime ahụ ya, bụ nke o nwetara oge o siri n’aka nne ya dapụ ka a na-alụ ọgụ.”
Nwata ahụ mechara nwụọ ka ọ na-anara ọgwụgwọ n’ihi nsogbu ahụ o nwetara n’ime ahụ. E tinyere ozu ya n’ọbaozu ụlọọgwụ ọha na eze, General Hospital Ijebu Igbo maka ime ya nnyocha a na-eme onye nwụrụ anwụ iji chọpụta ihe gburu ya (autopsy).
Kọmịshọna uweojii steeti ahụ, Lanre Bankola enyela iwu ka a hafee ndị ahụ kpara arụ n’aka ndị ọ dị n’aka. State Criminal Investigation and Intelligence Department maka ime nnyocha gaa n’ihu; dịka a ga-akpụpụ ha ụlọikpe mgbe nke ahụ gachara.